Wargeysyada Yurub Iyo Wararkii Ugu Danbeeyay Ee Ay Ka Qoreen Suuqa Kala Iibsiga Ciyaartoyda. – idalenews.com
Waxaa lagu jiraa bisha Janaayo waana mar kale iyo barnaamijkeenii suuqa kala iibisga iyo wararkii xanta ahaa ee la qoray maalin walba oo aan ka soo uruurino wargeysyada yurub ka soo baxa kuwooda ugu waa weyn.
LIVERPOOL: Weeraryahanka Liverpool Luis Suarez ayaa lala xiiriyay kooxda Jarmalka ee Bayern Munich. Kooxda hogaanka u heysa Bundesliga oo xaqiijisay imaanshiyaha Pep Guardiola ayaa haatan raadineysa inay ciyaaryahano ku soo kordhiyaan kooxdooda, waxaana ay 40 milyan ginni ku doonayaan Suarez, (Metro/Sport)
LIVERPOOL: Liverpool ayaa rajeyneysa inay maanta heshiis ka gaarto saxiixa Philippe Coutinho inkastoo uu ciyaaryahanka khadka dhexe shalay sheegay inuu doonayo inuu sii joogo Inter Milan. Kooxda Anfield ka dhisan ayaa la soo diiday dalabkoodii 8da milyan ginni ee ay ku doonayeen 20 jirkaan reer Brazil isbuucii hore laakiin wadahadalada ayaa sii socda waxaana Liverpool ay kalsooni ku qabtaa in markaan la aqbali doono dalabkooda labaad. (The Guardian)
LIVERPOOL: Wakiilka Pepe Reina, Manuel Garcia Quilon, ayaa wadahadalo la geli doona kooxda Liverpool maanta oo ku aadan mustaqbal goolhayaha. Aabihiisa ayaa dhawaan sheegay inuu jecel yahay Reina inuu ku laabto Barcelona oo ah halkii uu ka bilaabay mustaqbalkiisa ciyaareed. (Daily Mail)
MANCHESTER CITY: Mario Balotelli oo dhawaan iska dhiibay kurigii u kireysnaa ee Manchester ayaa la rumeysan yahay in weeraryahankiisa uu qalabkiisa ka qaadanayo guriga isagoo filanaya inuu ka tagayo Manchester City islamarkaana u dhaqaaqayo kooxda uu taageerada u yahay ee AC Milan. (The Guardian)
MANCHESTER UNITED: Manchester United ayaa qiimeyneysa goolhayaha reer Brazil ee kooxda QPR Julio Cesar. Kooxda ayaa waxaa heysta dhibaato goolhaye, waxaana ay raadineysaa goolhaye koowaad oo qibrad leh. (The Sun)
MANCHESTER UNITED: Weeraryahanka Man United Federico Macheda ayaa mar kale dhaqaaqi doono, markaana waxa uu ku sii jeedaa Spian. Ciyaaryahanka Talyaaniga ayaa aqbalay dalab uga yimid kooxda heerka labaad ee Spain Elche inta ka dhiman xilli ciyaareedkan. (Daily Express)
ARSENAL: Arsenal ayaa dooneysa inay sameyso labo saxiix oo waa weyn ka hor inta uusan xirmin suuqa kala iibsiga. Burburiye khadka dhexe ah iyo weeraryahan iyo sidoo goolhaye ayaa ah waxa ugu muhimsan ee ay doonayaan. (Telegraph)
ARSENAL: Arsenal ayaa isku dayi doonta inay gacanta ku dhigto si raqiis ah xiddiga Barcelona David Villa dhamaadka suuqa kala iibsiga. Tababare Arsene Wenger ayaa diyaar u ah inuu 10 milyan ginni ku dhaqaaqo inkastoo kooxda reer Spain ay ku adkeysaneyso inuusan iib aheyn. Arsenal ayaa caawa wajheysa West Ham, waxaana Wenger uu qirtay inuu xiiseynayo 25 jirkooda khadka dhexe Mohamed Diame. Ciyaaryahankaan ayaa qandaraaskiisa waxaa lagu burburin karaa 7 milyan ginni. ( The Sun)
MANCHESTER CITY: Manchester City ayaa diyaar u ah inay kula dagaalanto kooxda ay xafiiltamaan saxiixa goolhayaha Stoke Asmir Begovic. Tababaraha City Roberto Mancini ayaa doonaya in ciyaaryahanka reer Bosnia uu keeno Etihad Stadium si uu tartan adag u la galo Joe Hart. (Daily Mirror)
CHELSEA: Ciyaaryahanka garabka uga ciyaara Chelsea Marko Marin ayaa diirada si aamah ahaan ah ugu saaran CSKA Moscow. 23 jirkaan ayaa sideed kulan ka soo muuqday Chelsea xilli ciyaaredkan, waxaana uu doonayaa inuu weli ka muuqdo xulka Jarmalka oo uu helo waqti uu ku ciyaaro. (The Daily Mirror)
AC MILAN: Iyadoo Rossoneri ay ka dhaadhicin la’adahay Manchester City inay dhimaan qiimaha ciyaaryahan Mario Balotelli, madaxweyne ku xigeenka kooxda waxa uu go’aansaday inuu u jeesto soo xerogelinta Didier Drogba, waxaana ay diyaar u yihiin inay kula soo wareegaan weeraryahanka Shanghai Shenhua adduun lacageed oo gaaraya 8 milyan euro, isagoo saxiixi doona heshiis sannad iyo bar ah. (Gazzetta dello Sport)
AC MILAN: Wadahadaladii u dhaxeeyay Real Madrid iyo AC Milan ee ku aadanaa heshiiska Kaka ayaa weli socda, ciyaaryahanka dhankiisa waa uu sameeyay wax walba oo uu ku fududaan lahaa heshiiska, laakiin labada kooxood ayaan ka heshiis lacagaha canshuuraadka ah ee la socda heshiiska. (Gazzetta dello Sport)
CHELSEA: Milkiilaha kooxda Chelsea Roman Abramovich ayaa doonaya inuu Rafael Benitez ku bedelo tababaraha reer Italy Luciano Spaletti oo haatan macalin ka ah kooxda Ruushka ee Zenit. (Corriere dello Sport)
INTER: Kooxda Inter Milan ayaa dooneysa in booskii uu baneeyay Wesley Sneijder ay ku buuxiyaan kubadsameeyaha reer Morroco ee kooxda Montpellier Younès Belhanda. (Tuttosport)
AC MILAN: Heshiiska Kaka uu ugu soo wareegi lahaa Rossoneri ayaa lagu soo waramayaa inuu ku jiro gacmaha milkiilaha kooxda Silvio Berlusconi. (Tuttosport)
BARCELONA: Kooxda Blaugrana ayaa fursad u siin doonta ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkan inuu Victor Valdes kaga laabto go’aankiisii hore ee ahaa inuu kooxda isaga tagayo marka uu dhamaado qandaraaskiisa 2014. (Mundo Deportivo)
JUVENTUS: Kooxda Juventus ayaa dooneysa inay kula tartano Arsenal saxiixa David Villa iyadoo doonaya inay wadahadal la furtaaan Barcelona, iyadoo David Villa uusan ku faraxsaneyn kursiga keydka. (Sport)
ATLETICO MADRID: Ciyaaryahanka Espanyol Joan Verdú ayaa cusbooneysiin doonin heshiiska uu kual jiro Espanyol, waxaana uu qarka u saaran yahay inuu ku biiro Atletico Madrid. (AS)
BARCELONA: Barcelona ayaa dooneysa inay amaah ku fasaxdo da’ yarkeeda Isaac Cuenca. Waxa uu dhaawac ku maqnaa muddo dhowr bilood ah isagoo haatan garoomada ku soo laabtay. (Marca).
ESPANYOL: Ciyaaryahanka aan saldhigan kooxda West Ham ee Alou Diarra ayaa diirada u saaran bishaan Janaayo kooxda Espanyol ee dalka Spain. (Sport).
DORTMUND: Edin Dzeko ayaa loo ogolaan doonaa inuu ka tago Manchester City. Borussia Dortmund ayaa dooneysa hadii Robert Lewandowski uu ka tago kooxda Jarmalka. Arinta ugu weyn ayaase ah mushaharkiisa. (Bild)
BAYERN MUNICH: Ilo laga helayo Spain ayaa sheegaya in Bayern Munich ay u dhaqaaqi doonto mid ka mid ah weeraryahanadan: Radamal Falcao (Atletico Madrid), Luis Suarez (Liverpool), Edinson Cavani (Napoli) ama Edin Dzeko (Manchester City) (Mirror).
LYON: Madaxweynaha kooxda Lyon Jean-Michel Aulas ayaa sheegay in Juventus ay xiiseyneyso kaliya inay amaah ku qaadato Lisandro Lopez oo uu sheegay inaysan taasi u fiicneyn ciyaaryahanka. Waxaana uu sheegay inay u badan tahay inuu iska sii joogi doono Lyon. (L’Equipe)
Madaxweyne Xasan Sheekh oo kulan la yeeshay wakiilo ka socday deeq bixiyaasha..